उत्तम एन्ड्रोइड फोनहरू: परीक्षण, सुरुवात, अफवाहहरू ... | Androidsis (पृष्ठ) 21)
एक कथित शाओमी रेडमी EN टेनामा लीक हुन्छ
कथित शाओमी रेडमी आधिकारिक TENAA वेबसाइटमा यसको धेरै सुविधाहरू र प्राविधिक विवरणहरूको साथ भर्खरै लीक भएको छ। यो उपकरण रेडमी succeed लाई सफल बनाउन आउनेछ, जुन आज चिनियाँ फर्मको सबैभन्दा प्रसिद्ध मध्य दायरा हो। हामी तपाईंलाई खबर विस्तार!
शाओमी एमआई Features का सुविधाहरू र प्राविधिक विवरण यसको प्रस्तुतीकरण अघि चुहावट भयो
शियाओमी मी 8-पहिले एमआई - को रूप मा परिचित छ हालसालै वेइबोमा यसको केही विशेषताहरु र टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्सको साथ अगाडि बढाइएको छ जसको प्रक्षेपण केही दिन पछि चीनमा हुने छ। हामी तपाईंलाई जानकारी दिन्छौं!
सियाओमीले पुष्टि गर्‍यो कि त्यहाँ सियाओमी मी7छैन
पुष्टिकरण: त्यहाँ सियाओमी एमआई will हुनेछैन, केवल एमआई launched सुरूवात हुनेछ। यस कन्फर्मेसनको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस् कि हामी केवल चिनियाँ ब्रान्ड इभेन्टमा नयाँ हाई-एन्ड मात्र हेर्न जाँदैछौं।
शाओमी मी ब्यान्ड of को पहिलो छविहरू फिल्टर गरिएका छन्
सियाओमी एमआई ब्यान्ड of को तेस्रो जेनरेशन के हुनेछ भनेर पहिलो छविहरू भर्खरै फिल्टर गरिएको छ, र जहाँ तपाईं एक निरन्तरता डिजाइन देख्न सक्नुहुनेछ तर अधिक जानकारीको साथ स्क्रीन।
LG ले LG V35, Q7, Q7 Plus, X5 र X2 जुनमा ल्याउने छ
LG ले LG V35, X5 र X2 जुन दक्षिण कोरियामा दक्षिण कोरियामा सुरु गर्नेछ। फोनका बारे अधिक जान्नुहोस् जुन निर्माताले तपाईंको देशमा जुन जुन महिनामा सुरूवात गरिरहेका छन्।
वनप्लस आईफिक्सिट स्कोरमा १० मध्ये6प्राप्त गर्दछ
वनप्लस by द्वारा प्रस्ताव गरिएको मर्मत योग्यता १० र बाहिर only सँग मात्र राम्रो र नराम्रो स्कोरको बीचमा आउँछ।
रमोर: सोनीले मोबाइल फोनहरू बनाउन रोक्न सक्दछ
रमोर: सोनीले स्मार्टफोन बनाउन रोक्न सक्दछ। यस समाचारको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस् जसको मतलब जापानी ब्राण्डले मोबाइल फोन निर्माण गर्न रोक्दछ।
HTC U12 +: HTC को नयाँ प्रमुख अब आधिकारिक छ
HTC U12 +: विशिष्टता, मूल्य र आधिकारिक सुरुवात। ताइवान निर्माताको नयाँ प्रमुखका बारे अधिक जान्नुहोस् जुन आज आधिकारिक रूपमा अनावरण गरिएको थियो।
रजर फोन नयाँ पोर्ट्रेट मोडको साथ अपडेट भयो
सहायक उपकरण निर्माता रेजरले भर्खर फोनको लागि नयाँ अपडेट जारी गरेको छ जुन सुधारिएको पोर्ट्रेट मोड थप्नमा केन्द्रित छ।
MIUI 10 मे on१ मा शाओमी मी 31 को साथ आइपुग्नेछ
MIUI 10 आधिकारिक रूपमा मे 31 मा प्रस्तुत गरिनेछ। सियाओमी फोनहरूको लागि नयाँ निजीकरण तहको आगमनको बारेमा बढि जान्नुहोस् जुन चिनियाँ ब्रान्डले योजना गरेको छ कि घटनामा आइपुग्नेछ।
OUKITEL K7: १०,००० mAh ब्याट्रीको साथ सस्तो स्मार्टफोन
OUKITEL K7: १०,००० mAh ब्याट्रीको साथ नयाँ फोन। ब्रान्डको नयाँ उपकरणको बारेमा अधिक पत्ता लगाउनुहोस् जुन यसको ठूलो ब्याट्रीको लागि बाहिर खडा छ।
Meizu M6T स्प्रिडट्रम SoC संग Geekbench मा देखा पर्दछ
Meizu M6T गीकबेन्च डाटाबेसमा हालसालै देखा पर्‍यो, एन्टु टुको छेउमा त्यहाँका सबैभन्दा प्रसिद्ध बेन्चमार्कहरू मध्ये एक। यो टर्मिनललाई स्प्रिडट्रम फर्मका प्रोसेसरले दिएको नोटका अनुसार पावर हुने छ ... हामी SC9850 को बारेमा कुरा गर्दैछौं।
वनप्लस the ब्राण्डको सब भन्दा छिटो बिक्री हुने फोन हो
वनप्लस the ब्रान्डको सबैभन्दा बिक्रि हुने फोन हो। चिनियाँ निर्माताका लागि सफलता रहेको उच्च-अन्तको राम्रो बिक्रीको बारेमा अधिक पाउनुहोस्।
LG Q7 को आगमन स्पेन को लागी पुष्टि छ। यसको मूल्य जान्नुहोस्!
दक्षिण कोरियाली विशाल एलजी ले हालै पुष्टि गरिसक्यो कि एलजी क्यू Spanish स्पेनी क्षेत्रमा आइपुग्छ, र यसले कती मिति तोकेको छैन जुन हामीले यो नयाँ मध्य-दायरा हिजोमा प्रस्तुत गर्ने देख्यौं, हामीसँग पहिले नै त्यस्तो सस्तो नभएको बारेमा जानकारी छ। मूल्य निर्दिष्ट गरीनेछ।
OUKITEL U18 समीक्षा
OUKITEL U18, एक "सबै निशान" शुद्ध आईफोन एक्स शैली भन्दा उत्कृष्ट स्क्रीनको स्मार्टफोन, जुन यसको GB जीबी र्याम, GB4जीबी मेमोरी र 64००० एमएएच ब्याट्रीको लागि पनि खडा छ। हामी तपाईंलाई यसको विशेषताहरू, मूल्य बताउँछौं र यदि यो वास्तवमै यसको लागि लायक छ भने।
सामसुले Wear OS को साथ स्मार्टवाचमा काम गरिरहेको छ
सामसुले Wear OS को साथमा वाचमा काम गरिरहेको छ। यस वर्ष कोरियाली ब्रान्डबाट आउने अनुमान गरिएको हेर्ने बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस्।
चीनमा लेनोभोको बिक्री तीव्र रूपमा घट्दै गयो
लेनोभोले चीनको बजारको ०..0,4% प्रतिनिधित्व गर्दछ। चीनमा ब्रान्डको कम बिक्रीको बारेमा अधिक पाउनुहोस्, जहाँ यसले आफ्नो बजार सेयर गुमाएको छ।
HTC U12 +: नयाँ लीक सुविधाहरू र चश्मा ... यसको मूल्य पनि!
एक दिन यसको प्रस्तुतीकरण पछि, HTC U12 + को मूल्य र स्पेसिफिकेशन्स फ़िल्टर गरियो, ताइवानको नयाँ मोबाइल जसले SD845 SoC मार्केटमा हिट गर्ने छ, एक उत्कृष्ट गुणस्तरको पर्दाको साथ जो कसैलाई ईर्ष्या गर्दैन, र अन्य गुणहरू सहित। यसले पक्कै ब्रान्डको बिक्रीलाई बढावा दिन्छ।
पुष्टि भयो: Xiaomi Mi 8 मे 31१ मा प्रस्तुत गरिने छ
यो आधिकारिक हो: शाओमी मी 8 मे 31१ मा प्रस्तुत गरिने छ। चिनियाँ निर्माताबाट नयाँ फोनको प्रस्तुतीकरणका बारे अधिक जान्नुहोस् जुन हस्ताक्षर कार्यक्रममा यस महिनाको पछि आउँनेछ।
अप्रिल २०१ 10 को १० सबैभन्दा शक्तिशाली फोनहरू, एन्टु बेन्चमार्कका अनुसार
आन्टुले बजारमा महिनामा सब भन्दा शक्तिशाली टर्मिनलहरूको सूची ल्याउँदछ, जुनमा यस अवसरमा हामी शाओमी ब्ल्याक शार्कको नाम देख्न सक्दछौं जुन चिनियाँ फर्मले केही हप्ता अघि सुरू गरेको थियो। हामी तपाईंलाई विस्तार!
नोकिया X6 चीन मा १० सेकेन्ड मा बिक्छ
नोकिया X6 चीनमा मात्र १० सेकेन्डमा बिक्री भयो। नयाँ नोकिया फोन चीनको बजारमा कती सफल भयो भन्ने बारे थप जान्नुहोस्।
यो नयाँ सामसु Galaxy ग्यालेक्सी J8 हो: विनिर्देशहरू, मूल्य, छविहरू
हामी तपाईंलाई नयाँ सामसु Galaxy ग्यालेक्सी जे, को टर्मिनलको विशेष विवरण र सुविधाहरू देखाउँदछौं जुन भारतमा भर्खरै बिक्रीको लागि राखिएको छ।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी J6: एन्ड्रोइड Oreo मा प्रवेश सीमा दांव
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी J6: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र सुरुवात। आजको अनावरण गरिएको कोरियन ब्रान्डबाट नयाँ प्रविष्टि-स्तर फोनको बारे अधिक जान्नुहोस्।
LG Q7, LG Q7α र LG Q7 +: LG को मध्य-दायरा नविकरण गरियो
LG Q7, LG Q7α र LG Q7 +: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र सुरुवात। LG को नयाँ मध्य-दायरा मोडेलहरू बारे अधिक जान्नुहोस् जुन आधिकारिक रूपमा आज अनावरण गरिएको थियो।
ग्यालक्सी एस लाइट लग्जरी: ग्यालक्सी एस The को लाइट संस्करण
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी एस लाइट लक्जरी: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र सुरुवात। आज नयाँ कोरियाली ब्रान्डबाट पत्ता लगाएको कोरियन ब्रान्डबाट नयाँ फेला पार्नुहोस्।
Bixby 2.0, गैलेक्सी नोट9संग मार्केटमा आउँछ
सामसु'sका निजी सहायक बिक्सबीले ग्यालेक्सी नोट of को प्रक्षेपणको साथ दोस्रो संस्करण जारी गर्ने छ जुन पछिल्लो अफवाहका अनुसार जुलाई महिनामा देखाइएको छ।
शाओमी मी म्याक्स this यस बर्ष जुलाईमा सुरूवात हुनेछ
Xiaomi Mi Max3जुलाईमा बजारमा उत्रिनेछ। नयाँ चिनियाँ ब्रान्ड फोनको सुरुवातका बारे अधिक जान्नुहोस् जुन यस गर्मीमा आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत हुनेछ।
Huawei Y5 Prime 2018: Y दायरामा नयाँ फोन
Huawei Y5 Prime 2018: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र सुरुवात। चिनियाँ ब्रान्डबाट नयाँ फोनको बारेमा अधिक खोजी गर्नुहोस् जुन यसको सबैभन्दा किफायती दायरामा पुग्छ।
ग्यालक्सी एस लाइट लक्जरी (गैलेक्सी एस Lite लाइट) आज प्रस्तुत गरिने छ
सामसुले ग्यालक्सी एस लाइट लक्जरी आज पेश गर्नेछ। आज नयाँ फोनको बारेमा कोरियाली ब्रान्डबाट सुरू गर्नुहोस्।
सामसुले यसको नयाँ विज्ञापनमा आईफोन र 'ब्याट्रिगेट' को मजाक बनाउँछ
सामसुले एप्पललाई नक्कल गर्ने नयाँ विज्ञापन सुरू गर्‍यो। कोरियाली फर्मको नयाँ विज्ञापनको बारेमा अधिक जानकारी लिनुहोस् जसमा यसको मुख्य प्रतिद्वन्द्वी ठट्टामा छ।
शाओमी रेडमी A ए मार्चमा विश्वको सबैभन्दा धेरै बिक्रि हुने एन्ड्रोइड मोबाइल थियो
शाओमी रेडमी A ए विश्वव्यापी तेश्रो सबैभन्दा धेरै बिक्रि हुने फोन हो। चिनियाँ ब्रान्डको फोनको सफलताको बारेमा बढि जान्नुहोस्, जुन सब भन्दा बेच्ने Android उपकरण हो।
सामसुले ग्यालेक्सी नोट of को जुलाई महिनामा प्रक्षेपण गर्न सक्दछ
विभिन्न कोरियाली मिडियाका अनुसार, सामसु company कम्पनीले ग्यालक्सी नोट of को प्रस्तुतीकरणको मिति एक महिना अगाडि बढाउने योजना बनाएको छ, अगस्टको सट्टा, यो जुलाईको सुरुवात मिति हुनेछ।
ग्यालक्सी S7 र S7 + को लागि Oreo अपडेट फेरि उपलब्ध छ
ग्यालक्सी S7 र S7 Edge बाट अन्तिम Android Oreo अपडेट हटाएको दुई दिन पछि, कोरियाली कम्पनीले त्रुटि पहिले नै तय गरिसकेको छ र हामीलाई फेरि उपकरण अपडेट गर्न अनुमति दिन्छ।
Honor 10 यूरोप मा आफ्नो पहिलो दिन मा बिक्छ
ह्यानर १० युरोपको शुरुआती दिनमा स्टक आउट भयो। सफलताको बारेमा अधिक पाउनुहोस् जुन चिनियाँ ब्रान्डको उच्च-अन्तले युरोपमा आफ्नो प्रक्षेपणमा गरिरहेको छ।
Bixby 2.0 छिटो हुन्छ र तपाईंलाई राम्रोसँग बुझ्दछ
Bixby २.० चाँडो चल्नेछ र प्रयोगकर्तालाई राम्रोसँग बुझ्दछ। यस वर्ष आउने कम्पनी सहायकको नयाँ संस्करणमा परिमार्जन हुने सुधारहरूको बारेमा बढि खोज्नुहोस्।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी J4 को नयाँ लीक विवरण प्रकट भयो
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी परिवारको जे श्रृंखलाले सामसु Galaxy ग्यालेक्सी J4 प्राप्त गर्न लागिरहेको छ, नयाँ सदस्य जुन एकदम चाँडै आइपुग्नेछ। प्रत्येक बितेको दिनको साथ, यो स्पष्ट छ कि यो अर्को कम-अन्त आइपुग्छ, र यो रूढीवादी तरीकाले मोबाइल सुविधाहरू र प्राविधिक विवरणहरूको लागि धन्यवाद गर्दछ।
वनप्लस सबैभन्दा प्रख्यात धीरज जाँचमा पर्छ
वनप्लस ले जेरीग्रेविभरी धीरज परीक्षण पार गर्दछ। लोकप्रिय प्रतिरोध परीक्षणको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस् जुन चिनियाँ ब्रान्डको नयाँ उच्च-अन्त आएको छ।
नयाँ वनप्लस of को वालपेपर डाउनलोड गर्नुहोस्
यस लेखमा तपाईले नयाँ वालपेपरहरू पाउन सक्नुहुनेछ जुन वनप्लस from बाट उनीहरूको मूल रिजोलुसनमा आउँदछ।
सामसु्गले Exynos प्रोसेसर ZTE मा बेच्न सक्दछ
ZTE वार्तामा सामसु Ex Exynos प्रोसेसरहरू किन्नको लागि। प्रोसेसरहरूको खरीदको लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सक्ने दुवै कम्पनीहरू बीचको सम्पर्कहरूको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
शाओमीले मे 31१ मा आफ्नो नयाँ फोन प्रस्तुत गर्नेछ
सियोमीले मे 31१ मा नयाँ उत्पादनहरू प्रस्तुत गर्दछ। चिनियाँ ब्रान्डको प्रस्तुतीकरण कार्यक्रमको बारेमा थप फेला पार्नुहोस् जुन नयाँ उत्पादनहरू सुरू गर्न तयारी गर्दैछ।
ASUS Zenfone Live L1: ब्रान्डको नयाँ प्रविष्टि-स्तर दायरा
ASUS Zenfone Live L1: विशिष्टता, मूल्य र सुरुवात। ब्राण्डको नयाँ एन्ट्री-स्तर फोनको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस् जुन एशियामा पहिल्यै सुरू भईरहेको छ।
HTC U12 + पूर्ण रूपमा चुहावट भयो
HTC U12 +: डिजाइन र विशिष्टता प्रस्तुतिको अगाडि चुहायो। ब्रान्डको नयाँ उच्च-अन्तका बारे थप जान्नुहोस् जुन अर्को हप्ता प्रस्तुत हुनेछ र जसको हामी सबै विवरणहरू पहिले नै जान्दछौं।
वनप्लस:: फर्मको नयाँ प्रमुखको विशिष्टता र विशेषताहरू
केही घण्टा अघि, टेक्नोलोजी विशाल वनप्लसले आफ्नो नयाँ फ्ल्यागशिप स्मार्टफोन प्रस्तुत गर्‍यो ... हामी वनप्लस about र T टीको उत्तराधिकारी वनप्लस about को बारेमा कुरा गर्दैछौं, दुई उपकरणहरू जो एन्टुको शीर्ष १० भित्र अवस्थित छन् सबैभन्दा बढी मध्ये एक हो शक्तिशाली कि, आज सम्म, हामी बजार मा पाउन सक्छौं।
HDR मा नेटफ्लिक्स अब सोनी Xperia XZ2, हुआवे P20 र मेट १० प्रो संग उपयुक्त छ
Xperia XZ2, Huawei P20 र मेट १० प्रो समर्थन नेटफ्लिक्स HDR। यी मोडेलहरूको बारेमा बढि खोजी गर्नुहोस् जुन अब यी सामग्रीहरू उत्तम रिजोलुसनमा पुन: उत्पादन गर्न सक्दछन्।
शाओमी E6 Geekbench मा पत्ता लाग्यो
शाओमी E6 को पहिलो विशिष्टता फ़िल्टर गरियो। नयाँ फोनको बारे अधिक जानकारी चिनियाँ ब्रान्डबाट फेला पार्नुहोस् जुन केहि पनि थाहा थिएन र जुन पहिले नै Geekbench मा देखा पर्‍यो,
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S9 दुई नयाँ रंग प्राप्त गर्दछ
फेरी, कोरियाली कम्पनीले यसको टर्मिनल मध्ये एकको एन्ड्रोइड ओरियोको अपडेट बजारबाट फिर्ता लिन बाध्य भएको छ: ग्यालक्सी एस and र एस Plus प्लस
सामसुले ग्यालक्सी S7 को Android Oreo मा अपडेट रोक्दछ
कोरियाली कम्पनी सामसुले यसको सर्भरबाट ग्यालक्सी S7 र S7 Plus को लागि Android Oreo अपडेट हटाउन बाध्य पारिएको छ।
ग्यालक्सी एस दक्षिण कोरियामा बेचिएको दस लाख एकाई भन्दा बढी छ
ग्यालक्सी S9 कोरियामा बेचिएको एक मिलियन एकाईहरूमा पुग्छ। कोरियाली फर्मको नयाँ उच्च-अन्तको बिक्रीको बारेमा अधिक पत्ता लगाउनुहोस्, जुन अघिल्लो जेनेरेसनको भन्दा सुस्त बिक्री भइरहेको छ।
हामी सिधा अमेजनमा वनप्लस buy खरीद गर्न सक्षम हुनेछौं
एसियाली कम्पनी वनप्लसले अमेजन मार्फत आफ्नो अर्को फ्लगशिप बेच्न ई-वाणिज्य विशाल अमेजनसँग सम्झौता गरेको छ।
HTC Exodus: ब्रान्डको ब्लकचेन फोन
HTC Exodus: पहिलो blockchain फोन यस वर्ष आउँदैछ। यस वर्ष मार्केटमा हिट गर्न ब्राण्डको पहिलो फोनको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस्।
स्पेनमा सम्मान १० को मूल्य र उपलब्धता
यदि तपाईं हनर १० को स्पेनिश बजारमा लन्चको लागि प्रतिक्षा गरिरहनु भएको थियो भने, तपाईं भाग्यमा हुनुहुन्छ, किनकि तपाईं यसको GB 10 जीबी संस्करणमा 399 64eयूरो मात्र पाउनुहुनेछ।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी J6 का पहिलो चित्रहरू फिल्टर गरिएका छन्
हामी तपाईंलाई अर्को टर्मिनलको पहिलो छविहरू देखाउँदछौं जुन कोरियाली कम्पनीले बजारमा सुरू गर्ने योजना बनाएको छः ग्यालक्सी J6
शाओमी स्पेनमा पहिले नै तेस्रो सबैभन्दा धेरै बिक्रि हुने ब्रान्ड हो
शाओमी स्पेनमा पहिले नै तेस्रो सबैभन्दा धेरै बिक्रि हुने ब्राण्ड हो। हाम्रो देशमा चिनियाँ ब्रान्डको बिकासको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस् जहाँ यो पहिले नै एक उत्तम विक्रेता हो।
सुविधाहरू र नोकिया X6 को प्राविधिक विशिष्टता यसको प्रस्तुतीकरण अघि प्रकट भयो
केही घण्टा अघि, नोकिया X6 का मुख्य गुणहरू भर्खरै फिल्टर गरिएको छ, कम्पनीको अर्को स्मार्टफोन जुन एक खाच डिजाइन र अन्य गुणहरूसँग मिल्नेछ जुन यसलाई मध्य-दायराको रूपमा प्रमाणित गर्दछ। हामी तपाईंलाई विस्तार!
लाइटन्टिबक्सले हामीलाई शाओमी उत्पादनहरूमा प्रस्ताव गर्दछ शानदार प्रस्तावहरूको फाइदा लिनुहोस्
हामी तपाईंलाई केहि सब भन्दा चाखलाग्दो प्रस्तावहरू देखाउँदछौं जुन हामी हाल स्याओमीबाट लाइटिंथबक्स वेबसाइट मार्फत पाउन सक्छौं
वनप्लस यसको प्रस्तुतिको दिनमा नेदरल्याण्ड्समा किन्न सकिन्छ
वनप्लस यसको प्रस्तुतिको दिनमा नेदरल्याण्ड्समा किन्न सकिन्छ। यस नयाँ सम्झौताको साथ फोनसहित नेदरल्याण्डको बजारमा ब्रान्डको प्रवेशको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस्।
नयाँ नोकिया X6 को अन्तिम मूल्य प्रकट भयो
नोकिया X6: खाचको साथ पहिलो नोकिया फोनको मूल्य प्रकट गर्‍यो। भोलि प्रस्तुत गरिएको ब्रान्डको नयाँ मध्य-दायराको बारेमा थप फेला पार्नुहोस् र जसको हामीलाई पहिले नै यसको मूल्य थाहा छ।
यस पदोन्नतिको लागि सबै भन्दा राम्रो मूल्य धन्यवाद OUKITEL K7 प्राप्त गर्नुहोस्
OUKITEL K7, १०,००० mAh क्षमताको लागि धेरै दिनको लागि स्वायत्तता दिने वाचा गर्ने स्मार्टफोन, तेज चार्जिंग, डुअल क्यामेरा र-इन्च स्क्रीन $ .$.10.000 for को लागि तपाईंको हुन सक्छ।
सिरिन ल्याबले फिन्नीको विशिष्टिकरणहरू प्रकट गर्दछ, यो ब्लकचेनमा आधारित पहिलो मोबाइल हो
फिन्नी फ्ल्यागशिपको लागि योग्य गुणहरू भएको एक उपकरण हो। योसँग पछिल्लो र सब भन्दा शक्तिशाली क्वालकॉम एसओसी छ, र यसका साथै यसमा अन्य धेरै फाइदाहरू पनि छन् जुन यसलाई हाम्रो क्रिप्टोकरन्सीहरू भण्डारण गर्न सुरक्षित विकल्पको रूपमा प्रस्ताव गर्दछ। यसको विशिष्टता र सुविधाहरू जान्नुहोस्!
HTC U12 + को वालपेपर डाउनलोड गर्नुहोस्
यदि तपाईं HTC U12 + को नयाँ वालपेपरको साथ आफ्नो स्मार्टफोन निजीकृत गर्न चाहनुहुन्छ भने, यस लेखमा हामी तपाईंलाई टर्मिनल बजारमा प्रस्तुत गर्नु अघि तिनीहरूलाई डाउनलोड गर्ने सम्भावना प्रस्ताव गर्दछौं।
हामीले पहिले नै थाहा पाइसकेका छौं कि शाओमीले कुन फोनहरू यस २०१ market मार्केटमा ल्याउने छ
सियामीले मार्केटमा सुरू गर्ने मोडेलहरूको नामहरू फिल्टर गर्नुहोस्। चिनियाँ ब्रान्डको योजनाहरूको बारेमा अधिक जानकारी लिनुहोस् जसको फोनहरू पहिले नै प्रकट भइसकेको छ।
यसको सुरूवातमा वनप्लस of को निश्चित मूल्यहरू फिल्टर गरियो। चिनियाँ ब्रान्ड फोन छिट्टै स्टोरहरुमा यसको सुरूवात हुन गइरहेको छ कि मूल्यहरु को बारे मा अधिक जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्।
श्याओमीले कूलप्याडद्वारा पेटेन्ट उल्लंघनको आरोप लगाई
कूलप्याडले सियोमीलाई पेटेन्ट उल्ल .्घनको लागि मुद्दा हालिसकेको छ। कम्पनीले पेटेन्ट दुरुपयोगका लागि मुद्दा दायर गरेको मुद्दाको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस् जुन सियाओमी सार्वजनिक हुन लागिरहेको छ।
ग्यालक्सी जे and र ग्यालक्सी जे specific स्पेसिफिकेसन लीक भयो
अर्को टर्मिनलहरूको विशिष्टताहरू जुन सामसु Samsungले बजारमा सुरू गर्दछ, पहिले नै चुहावट भयो, विनिर्देशहरू जुन हामी तपाईंलाई यस लेखमा देखाउँदछौं।
Nubia V18 रातो मा पनि शुरू भयो
Nubia V18 नयाँ रातो रंगमा शुरू भयो। चिनियाँ निर्माताबाट फोनको नयाँ संस्करणको बारेमा अधिक खोज्नुहोस् जुन चाँडै रातो रंगमा सुरु हुनेछ।
LG Q7 को पहिलो विशिष्टता फ़िल्टर गरियो
LG Q7: पहिलो फोन स्पेस चुहावट भयो। फर्मको Q दायराबाट नयाँ उपकरणको बारे अधिक जान्नुहोस् जुन चाँडै मार्केटमा आइपर्नेछ।
शाओमी र नोकिया युरोपमा पहिले नै पाँचवटा सबैभन्दा धेरै बिक्रि हुने ब्रान्डहरू हुन्
शाओमी र नोकियाको बिक्री तथ्या .्कहरूको बारेमा अझ बढि पत्ता लगाउनुहोस् जुन युरोपमा सब भन्दा बेच्ने ब्रान्डमध्ये पहिलो पाँच मध्ये एक हो जुन केवल एक बर्षमा छ।
शियामी घर स्वचालन उत्पादनहरू अब गुगल सहायकसँग उपयुक्त छन्
शियाओमीको घर स्वचालन गुगल सहायकसँग उपयुक्त छ। यस घोषणाको बारेमा बढि खोज्नुहोस् जुन आउँदछ जब चिनियाँ ब्रान्डले संयुक्त राज्य अमेरिकामा यसको उत्पादन सुरू गर्दछ।
ZTE फोनहरू अपडेट गर्न अब सम्भव छैन
ZTE फोनहरूले अब अद्यावधिकहरू प्राप्त गर्न सक्दछ। यस समस्याको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस् जुन ZTE फोनका साथ सबै उपयोगकर्तालाई असर गर्दछ
विको दृश्य लाइट: १:: screen स्क्रिनको साथ नयाँ मध्य-दायरा
विको दृश्य लाइट: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र आधिकारिक सुरुवात। हाम्रो देशमा पहिले नै उपलब्ध फ्रान्सेली ब्रान्डको नयाँ मध्य-दायराको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
शाओमी रेडमी S2 यहाँ छ। यसको सबै विनिर्देशहरू र सुविधाहरू जान्नुहोस्!
हामी तपाईलाई शाओमी रेडमी एस २ प्रस्तुत गर्दछौं, नयाँ उपकरण जुन विभिन्न गुणहरूसँग मिलेर आएको छ जुन यसलाई उत्कृष्ट मध्य-दायराको रूपमा प्रस्तुत गर्दछ जुन बजारमा आफूलाई राम्रो ठाउँ दिन र चौथो मोबाइल निर्माताको सर्वश्रेष्ठ विक्रेता बन्न आउँदछ। सब भन्दा बढि बिक्री हुन्छ Samsung, Huawei र Apple पछि।
ब्ल्याकभ्यू BV5800 प्रो: कम्पनीको अर्को रबल्ड फोन आउन बाँकी छ
ब्ल्याग फोनका अग्रणी निर्माता ब्ल्याकभ्यूले आफ्नो नयाँ उपकरण छिट्टै सुरू गर्नेछ। हामी ब्ल्याकभ्यु BV5800 प्रोको बारेमा कुरा गर्दैछौं, केहि विशिष्टताहरू र सुविधाहरूसँग एक कम-अन्त जसले मध्य-दायरालाई पछ्याउँदछ जुन अर्को हप्ता अनलाइन हुनेछ। हामी तपाईलाई प्रस्तुत गर्दछौं!
एशियाली फर्म वनप्लसले हामीलाई नयाँ मोडल किन्नको लागि हाम्रो पुरानो वनप्लस हस्तान्तरण गर्छ भने २ 280० युरोसम्म रोचक छूट प्रदान गर्दछ।
स्पेनमा LG G7 ThinQ को मूल्य र उपलब्धता
नयाँ एलजी फ्ल्यागशिप, LG G7 ThinQ कोरियाली कम्पनीको शर्त हो, एक ...
ZTE अस्थायी रूपमा विश्वव्यापी मोबाइल बेच्न रोक्छ
अमेरिकी नाकाबन्दीका कारण ZTE मोबाइल फोनको बिक्री त्याग्छ। चिनियाँ निर्माताको निर्णयको बारे अधिक जानकारी लिनुहोस् जुन यसको दीर्घकालीन अस्तित्वको लागि समस्या खडा गर्दछ।
लेनोवो जुन १ 14 मा ZUK- ब्रांडेड फोन सुरुवात गर्नेछ
ZUK यस जून १ with मा नयाँ फोनको साथ फर्कन्छ। ब्रान्डको आधिकारिक रूपमा यसको नयाँ फोन मार्केटमा फिर्तीको बारे अधिक जान्नुहोस् जुन आधिकारिक रूपमा जूनमा अनावरण हुनेछ।
HOMTOM ले यसको 5th औं वार्षिकोत्सव मनाउँछ सीमित समयको लागि $ 50 सम्म छुटमा!
Homtom अविश्वसनीय छुट संग तपाइँको वार्षिकोत्सव शैलीमा मनाईरहेको छ जुन तपाईं याद गर्न सक्नुहुन्न! छुट जुन Homtom ले हामीलाई प्रति कुपन US $ 10 देखि US $ 50 सम्म दिन्छ। यो धेरै उपकरणहरूमा लागू हुन्छ जसमा हामीसँग Homtom H770, S8, र अन्य छन्।
वनप्लस May मे १ on मा लन्डनमा प्रस्तुत गरिएको छ, तर यो गीकबेन्चबाट भइसकेको छ
वनप्लस कम्पनीले आधिकारिक रूपमा वनप्लस of को औपचारिक प्रस्तुतीकरण दिन पुष्टि गर्यो, टर्मिनल जुन मे १ May मा लन्डनमा आधिकारिक रूपमा जारी हुनेछ।
Huawei Y3 (2018) विनिर्देशन प्रकट भयो
Huawey Y3 (2018): Android Go को साथ पहिलो Huawei फोन। एन्ड्रोइड गो प्रयोग गर्नका लागि पहिलो चिनियाँ ब्रान्ड फोनको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
N 360० N7, एक विशाल 5030०m०mAh ब्याट्रीको एक मध्य-दायरा सुरूवात भयो
Mobile 360० मोबाईलले N 360० एन style लाई स्टाइलमा चीनमा प्रस्तुत गरेको छ, यसको क्याटलगको नयाँ सदस्य जुन मध्यम मागका क्षेत्रमा यस क्षेत्रका लागि निर्धारित छ जुन यसको विशेषताहरू र मध्य-सीमा विवरणहरूको लागि धन्यवाद छ।
तीव्र एक्वोस आर २: स्नेपड्रैगन 2। को साथ नयाँ उच्च-अन्त र क्यामेरा केवल भिडियोको लागि केन्द्रित
तीव्रले शार्प एक्वोस आर २ प्रस्तुत गरेको छ, नयाँ उपकरण सामान्य विनिर्देशहरू र उच्च-अन्तका सुविधाहरूसहित। र यसको शक्तिशाली क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 2। प्रोसेसर र अन्य कम्पोनेन्टको लागि धन्यवाद, यो स्मार्टफोन अन्य निर्माताहरूका सब भन्दा कडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न आउँदछ।
विनिर्देशहरू र नयाँ BQ एक्वेरिस X2 र Aquaris X2 प्रो का सुविधाहरू
स्पेनिश कम्पनी BQ मा पहिले नै BQ एक्वेरिस X2 र Aquaris X2 प्रो हाम्रो लागि तयार छ, फर्मको दुई नयाँ मध्य-दायरा काफी रोचक गुणहरू र सुविधाहरू साथसाथै शक्तिशाली र उल्लेखनीय छ। तिनीहरूलाई चिन्नुहोस्!
Huawei / Honor7मोडेलको लागि Android Oreo Beta प्रक्षेपण गर्दछ
हुवावे कम्पनीले भर्खर7टर्मिनलका लागि एन्ड्रोइड ओरेओ बीटा प्रोग्राम खोलेको छ, जसमा कम्पनीको दोस्रो ब्रान्डका केही ह्यानर मोडलहरू पनि सामेल छन्।
ग्यालक्सी S9 र S9 + चीनमा रातो प्रक्षेपण
ग्यालक्सी S9 र S9 + चीनमा रातोमा उपलब्ध छ। नयाँ रातो र colorको बारेमा अधिक खोजी गर्नुहोस् जुन उच्च-अन्तमा चीनको बजारमा हुन्छ।
Oukitel U19: नेक्स्ट आईफोन एक्स क्लोन लगभग $ १०० आउँछ
Oukitel U19, एक टर्मिनल जुन यसको सुविधाहरूका कारण एक कम दूरीको स्मार्टफोन हुनेछ जुन १०० डलरको नजिक पुग्नेछ। आईफोन एक्स र U१ with को जस्तै, फर्मले हामीलाई यकिन गर्‍यो कि U १ 100..18-इन्च खाच प्रदर्शन छ।
शाओमी मी7मा यसको केसको हिसाबले पर्दा मुनि फिंगरप्रिन्ट सेन्सर हुने थियो
चिनियाँ कम्पनी शाओमी आराम गर्दिन, र यस्तो लाग्छ कि हामीसँग पहिले नै शाओमी मी ready तयार छ, अर्को फ्लैगशिप जुन आइपुग्नेछ, रियर फिंगरप्रिन्ट रिडर सामान्य छैन जस्तो गरीरहेको छ, तर पर्दा मुनि विभो एक्स २१ जस्ता पर्दाको साथ। यस सुविधाको साथ पहिलो मोबाइल, यो बोक्दछ।
Xiaomi Redmi S2: Aliexpress मा निर्दिष्टीकरण र मूल्य चुहावट
शाओमी रेडमी S2: विशिष्टता, मूल्य र लीक छविहरू। नयाँ फोनको बारे अधिक जानकारी फेला पार्नुहोस् चिनियाँ ब्रान्डबाट जसको डाटा एलिप्रेसमै पूर्णरूपमा चुहावट भयो।
Vivo Y75s र Vivo Y83 TENAA मा प्रमाणित गरिएको छ
Vivo Y75s र Vivo Y83: नयाँ मध्य-दायराको विवरण। चिनियाँ ब्रान्डको नयाँ फोनहरू बारे छिट्टै खोज्नुहोस् जुन चाँडै नै शुरू हुँदैछ।
ग्यालेक्सी J6 सुरुवात सामसु support समर्थन पृष्ठमा चुहावट पछि आउँदैछ
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी J6 को आधिकारिक सुरुवात मिति आउँदैछ, भारत र युक्रेनमा सामसु support समर्थन पृष्ठमा पोस्टबाट घटाएझैं
वनप्लस मा मुटुको दर सेन्सर प्रदान गर्दछ
वनप्लस मा ग्यालक्सी एस like जस्ता हार्ट रेट सेन्सर हुनेछ। नयाँ फिचरका बारे थप जान्नुहोस् जुन चिनियाँ ब्रान्डको उच्च-अन्तको फोनमा आउँदैछ।
LG G7 ThinQ वालपेपर डाउनलोड गर्नुहोस्
यदि तपाईं नयाँ एलजी जी Th थिनक्यूको वालपेपरको लागि खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने, तल हामी तपाईंलाई exclusive exclusive अनन्य वालपेपरहरू देखाउँदछौं जुन कोरियाली फर्मको यो नयाँ फ्लगशिपको हातबाट आएका छन्।
Honor 7S: १ entry: screen स्क्रिनको साथ नयाँ प्रविष्टि दायरा
Honor 7S: विशिष्टता, मूल्य र आधिकारिक सुरुवात। चिनियाँ ब्रान्डबाट नयाँ कम-अन्त फोनको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस् जुन एक महिनामा बजारमा हिट हुनेछ।
शाओमी रेडमी एस २ मे १० मा प्रस्तुत गरिने छ
शाओमीले मे १० मा शाओमी रेडमी एस २ प्रस्तुत गर्नेछ। चिनियाँ ब्रान्डबाट नयाँ मध्य-दायरा फोनको प्रस्तुतीकरण मितिको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
LG V35 ThinQ को लीन्डर रेन्डरिंगहरू: LG V30S ThinQ, के तपाईं हुनुहुन्छ?
LG V35 ThinQ के हुन्छ भनेर विभिन्न रेन्डरहरू फुटेका छन्। विभिन्न अफवाह र श to्का अनुसार, अपेक्षित रूपमा, यो टर्मिनल हार्डवेयर सेक्सनमा धेरै सुधारहरू सहित आउँनेछ, जसमा हामी एक शक्तिशाली शक्तिशाली सोसाइटीमा पुग्न सक्दछौं, र जहाँसम्म क्यामेरा र ब्याट्रीको सम्बन्धमा अन्य सुधारहरू छन्।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S10 जनवरी २०१ 2019 मा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ
कोरियाबाट आएका भर्खरका अफवाहहरूले सुझाव दिन्छ कि सामसु advanceले अगाडि बढ्न सक्छ, एक बर्ष पछि, सामसु Galaxy ग्यालेक्सी एस १० प्रस्तुत गर्दछ अर्को साल जनवरीमा, MWC लाई छोड्छ।
वनप्लस of का केहि विशिष्टताहरू पुष्टि भयो
OnePlus6TENAA मा प्रमाणित: हामीसँग पहिले नै यसका विशिष्टताहरू छन्। चिनियाँ ब्रान्डको उच्च-अन्तको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस् जुन TENAA प्रमाणीकरण पार गरिसक्यो।
विको जेरी:: १ Android: screen स्क्रिनको साथ नयाँ एन्ड्रोइड गो स्मार्टफोन
विको जेरी:: निर्दिष्टीकरण, सुरुवात र आधिकारिक मूल्य। ब्रान्डको नयाँ कम-अन्त फोनको बारेमा खोजी गर्नुहोस् जुन अब उपलब्ध छ।
सामसु निर्माणकर्ता हो जसले वर्षको पहिलो त्रैमासमा सबै भन्दा धेरै स्मार्टफोन बेचेको छ
कोरियाली फर्म सामसुको १% भन्दा पनि कम बजार शेयर रहेको तथ्यलाई बावजुद सबैभन्दा ठूलो बजार…
HTC U12 + मे २ on मा प्रस्तुत गरिनेछ
HTC U12 + आधिकारिक रूपमा मे २ 23 मा अनावरण गरिनेछ। ताइवान ब्रान्डको नयाँ उच्च-अन्तको प्रस्तुतीकरण मितिको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी अनुप्रयोगहरूले अनुप्रयोगभित्र खरिदमा सयौं डलर दिएका छन्
ग्यालक्सी अनुप्रयोगहरूले सयौं डलर इन-एप खरीदमा दिन्छन्। सामसु phone फोन अनुप्रयोग स्टोरमा यो पदोन्नतीको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
सामसुले आधिकारिक रूपमा ग्यालक्सी A6 र ग्यालक्सी A6 +, विशिष्टता र सुविधाहरू प्रस्तुत गर्दछ
कोरियाली कम्पनी सामसुले आधिकारिक रूपमा नयाँ वेबसाइट ग्यालक्सी ए and र ग्यालक्सी ए Plus प्लस आफ्नो वेबसाइट मार्फत प्रस्तुत गरेको छ।
दक्षिण कोरिया मा ग्यालक्सी S9 बिक्री निराश
ग्यालक्सी S9 को बिक्री दक्षिण कोरिया मा अपेक्षाहरु को लागी कमी। तपाईको देशमा फोनको कम बिक्रीको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस् जुन निराश भएको छ।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी ट्याब एस the मार्केटमा आउँदैछ
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी ट्याब एस मार्केटमा छिट्टै हिड्नेछ। बजारमा सामसु'sको नयाँ ट्याब्लेटको आगमन बारे अधिक जान्नुहोस्, जुन धेरै लामो समय लिन हुँदैन।
शाओमी पहिले नै विश्वव्यापी चौथो सबैभन्दा धेरै बिक्रि गर्ने ब्रान्ड हो
शाओमी विश्वमा चौथो सबैभन्दा धेरै बिक्रि गर्ने ब्रान्डको रूपमा छ। यस वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा चिनियाँ ब्रान्डको बिक्रीको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
LG G7 ThinQ: फर्मको उच्च-अन्त अब आधिकारिक छ
LG G7 ThinQ: विशिष्टता, मूल्य र आधिकारिक सुरुवात। कोरियाली ब्रान्डको उच्च-अन्तको बारेमा थप फेला पार्नुहोस् जुन आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत भैसकेको छ।
OUKITEL K7: १०,००० mAh ब्याट्रीको साथ नयाँ फोन
OUKITEL K7: 10.000 mAh ब्याट्रीको साथ नयाँ उपकरण। ब्रान्डको नयाँ फोनको बारेमा अधिक खोज्नुहोस् जुन चाँडै नै सुरूवात हुन्छ र यसको ठूलो ब्याट्रीको लागि बाहिर खडा हुन्छ।
ग्यालेक्सी नोट of को दुई संस्करणहरू चीनमा प्रमाणित गरियो
ग्यालक्सी नोट of को दुई संस्करणहरू चीनमा प्रमाणित गरिएको छ। फर्मको उच्च-अन्तको बारेमा थप फेला पार्नुहोस् जुनसँग दुई फरक संस्करणहरू हुन्छन्।
शीर्ष दिवसहरू आमाको दिनमा दिनका लागि
सबै भन्दा राम्रो स्मार्टफोन आमाको दिन मा दिन। यस विशेष मितिमा दिनको लागि फोनको उच्चतम दायरा बीचको चयन पत्ता लगाउनुहोस्।
Huawei P20 Pro सबैभन्दा प्रसिद्ध धीरज परीक्षण पार
Huawei P20 Pro जेरीRigE Everything धीरज परीक्षण पार छ। पत्ता लगाउनुहोस् कि यदि उच्च-इन्टरनेटले इन्टरनेटमा सबैभन्दा लोकप्रिय परीक्षणको विरोध गर्दछ।
Android Oreo अब ग्यालक्सी S7 र S7 Edge को लागि उपलब्ध छ
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S7 र ग्यालक्सी S7 को Android Oreo को अपडेट ब्रिटेन मा पहिले नै उपलब्ध छ, त्यसैले यसले बाँकी देशहरूमा पुग्न ढिलाइ गर्दैन।
शाओमीले इटालीमा मे २ 26 मा पहिलो स्टोर खोल्नेछ
शाओमीले मेलामा आफ्नो नयाँ स्टोर मे २ 26 मा खोल्ने छ। चिनियाँ ब्रान्डको ट्रान्सप्लाइन देशमा पहिलो स्टोरको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस् जुन मेको अन्त्यमा आइपुग्नेछ।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी ए ((२०१)) र ग्यालक्सी ए (+ (२०१)) मूल्य र लीक सुविधाहरू
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी A6 (2018) र A6 + (2018) ले उनीहरूको मूल्यहरू प्रकट गर्छन्। थप रूपमा, भर्खरको र सबैभन्दा भर्खरका विशेषताहरू र यसका प्राविधिक विवरणहरू पनि रिलिज भएका थिए, पुष्टि गर्दै र, एकै समयमा, यी दिनहरू वेबमा रोमिंग गरिरहेका थुप्रैलाई खण्डन गर्दै।
पहिलो विनिर्देशहरू र शाओमी रेडमी S2 को भिडियो फिल्टर गर्नुहोस्
शाओमी रेडमी S2: पहिलो विशिष्टता र भिडियो लीक भयो। चिनियाँ ब्रान्डको नयाँ फोनको बारेमा बढि जान्नुहोस् जुन चाँडै बजारमा थाल्नेछ।
शाओमीले शाओमी मी ब्यान्ड of को पहिलो छवि देखाउँदछ
सियाओमीले शाओमी मी ब्यान्ड of को पहिलो छवि प्रकट गर्दछ। ब्रान्डको ब्रासलेटको पहिलो छविको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस् जुन यसले पहिले नै डिजाइनको खुलासा गरेको छ।
Huawei P20 Pro कम्पनीको पश्चिमी यूरोपमा सबैभन्दा बढी बिक्रि हुने उच्च-अन्त हो
पश्चिमी यूरोपमा हुवावे पी २० प्रोको बिक्रीको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस् जहाँ यो बिक्रीको सन्दर्भमा चिनियाँ ब्रान्डको लागि सफल भएको छ।
शाओमीले एन्ड्रोइड वन मार्फत दुई फोनहरू बजारमा ल्याउने छ
शियोमीले एन्ड्रोइड वन संग दुई फोनहरू अपरेटि। प्रणालीको रूपमा सुरू गर्ने छ। अपरेटिंग प्रणालीको यस संस्करणको साथ दुई मोडेलहरू सुरूवात गर्न चिनियाँ ब्रान्डको योजनाहरूको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S9 सक्रिय विनिर्देशहरू फुटेका छन्
कोरियाली कम्पनीको ग्यालक्सी एस of को प्रमुख कमान्ड संस्करण सामसु the ग्यालेक्सी एस Active एक्टिभको स्पेसिफिकेशन्स भर्खरै फुटेको छ।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी ए of को एक प्रचार भिडियो लीक भयो
अर्को ग्यालक्सी A6 र A6 + को पहिलो आधिकारिक छविहरूको चुहावट पछि, अब यो सामसु itselfबाटै भिडियोको पालो हो जहाँ हामी टर्मिनल देख्न सक्छौं
अत्यावश्यक फोन अब बेलायत र फ्रान्समा किन्न सकिन्छ
विगतको MWC मा कम्पनीले आश्वस्त गरेझैं, आवश्यक फोन र युरोपमा किन्न सकिन्छ, कम्तिमा ब्रिटेन र फ्रान्समा र जापानमा।
हुवावेले एन्ड्रोइडको वैकल्पिक अपरेटिंग सिस्टममा काम गरिरहेको छ
हुवावेले आफ्नै अपरेटि system प्रणाली विकास गर्दैछ। चिनियाँ ब्रान्डको योजनाहरूको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस् जुन आफ्नै अपरेटिंग प्रणाली सिर्जना गर्दछ।
नोकिया X का पहिलो छविहरू फिल्टर गरियो
नोकिया X को डिजाइन यसको पहिलो छविहरुमा चुहावट भयो। फर्मबाट नयाँ मध्य-दायरा फोनको बारेमा थप फेला पार्नुहोस् जुन मेमा प्रस्तुत हुनेछ।
हुवावेले उनीहरुसँग 74.326 XNUMX२XNUMX रेजिष्टर्ड प्याटेन्ट रहेको बताउँदछ
Huawei को स्वामित्वमा 74.326,,XNUMX२XNUMX प्याटेन्ट विश्वव्यापी रूपमा दर्ता गरिएको छ। चिनियाँ ब्रान्डको प्याटेन्टको बारेमा अधिक जानकारी पाउनुहोस् जसले आफैंलाई अनुसन्धान र विकासमा अग्रणी ब्रान्डको रूपमा स्थापित गरेको छ।
वनप्लस मा ढिलो गति भिडियो रेकर्डि। सुविधा प्रदान गर्दछ
वनप्लस मा ढिलो गति भिडियो रेकर्डि। हुनेछ। नयाँ फिचरका बारे अधिक जान्नुहोस् जुन उच्च-एन्ड फोनले लिन गइरहेको छ।
सुविधाहरू र स्पेसिफिकेसन्स भेराईजन द्वारा HTC U12 को लीक
एचटीसी यू १२ अमेरिकी अपरेटर भेरिजनको पृष्ठमा यसको विनिर्देशहरू र सुविधाहरूसहित लीक भएको छ। यस उपकरणलाई ताइवान फर्मको प्रमुख वर्गको रूपमा वर्गीकृत गरिनेछ यसको सबैभन्दा शक्तिशाली संस्करण, HTC U12 Plus (U12 +), साथ अर्को पनि कुरा गरिरहेको छ।
शाओमी मी प्याड tablet ट्याब्लेटको सम्भावित लीक विवरणहरू
सियोमी एमआई प्याड tablet ट्याब्लेटको विभिन्न प्राविधिक विशिष्टताहरू र सुविधाहरू, गत वर्ष हामीले देखेका मि प्याड to को उत्तराधिकारी लीक भयो। यो एक जिज्ञासु पर्दाको साथ आउँदछ, शक्तिशाली क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4० आठ कोर प्रोसेसर, र अधिकको साथ। हामी तपाईंलाई भन्छौं!
शियाओमी आफ्ना फोनको मूल्य कायम राख्न प्रतिबद्ध छ
शाओमीले आफ्नो फोनको मूल्य राख्न गइरहेको छ। चिनियाँ कम्पनीले यसको उपकरणको मूल्य बढाउनका लागि कारणहरूको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस्।
Huawei संयुक्त राज्य अमेरिका मा अनुसन्धान भइरहेको छ
संयुक्त राज्य अमेरिकाले हाल Huawei अनुसन्धान गरिरहेको छ। कम्पनीले ईरानसँग व्यापार गरेकोमा अमेरिकामा अधीनमा रहेको अनुसन्धानका बारे थप जानकारी लिनुहोस्।
LG G7 ThinQ GeekBench मा 4GB रमको साथ र स्नैपड्रैगन 845 को माध्यम बाट जान्छ
LG लाई LG G7 ThinQ तयार छ जस्तो देखिन्छ, अर्को उच्च-एंड स्मार्टफोन जुन दक्षिण कोरियाली बेस्ड कम्पनीले चाँडै नै यसको विस्तृत मोबाइल क्याटलगमा हामीलाई देखाउनेछ। यस उपकरण हालसालै प्रसिद्ध बेन्चमार्क गीकबेन्चको माध्यमबाट गएको छ। हामी तपाईंलाई विस्तार!
LG ले G7 ThinQ स्क्रिनको विशेषताहरु पुष्टि गर्दछ
LG ले यसको आउँदो फ्लगशिप G7 ThinQ को प्रदर्शन विशेषताहरूको पुष्टि गर्‍यो
नोकिया X6 अप्रिल २ on मा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ
नोकिया X6 आधिकारिक रूपमा अप्रिल २ 27 मा अनावरण हुनेछ। ब्रान्डको नयाँ मिड-रेंज फोनको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस् जुन यस शुक्रवार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।
शाओमी मी X एक्स अब आधिकारिक छ: यसको सबै विवरणहरू जान्नुहोस्
Xiaomi Mi 6X: विशिष्टता, मूल्य र आधिकारिक सुरुवात। चिनियाँ ब्रान्डको मिड-रेंज फोनको बारेमा अधिक जान्नुहोस् जुन आज आधिकारिक रूपमा अनावरण गरिएको थियो।
पुष्टि भयो: वनप्लस May मे १ on मा चीनमा प्रस्तुत गरिने छ
वनप्लस आधिकारिक रूपमा मे १ on मा चीनमा अनावरण हुनेछ। मे मा मा उच्च को फोन को प्रस्तुतीकरण को बारे मा अधिक जान्नुहोस्, कम्पनी नै आफैं द्वारा पुष्टि गरीएको छ।
ग्यालक्सी ए3२०१ एन्ड्रोइड ओरियोमा अपडेट हुन थाल्छ
ग्यालक्सी ए3२०१ 2017 को लागि लामो प्रतीक्षा गरिएको एन्ड्रोइड ओरियो अपडेट रसियामा बस्ने प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपलब्ध हुन थालिसकेको छ, त्यसैले यसले युरोपको बाँकी भागमा पुग्न लामो समय लिन हुँदैन।
यो नयाँ शाओमी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल १,००० भन्दा कमको लागि हो
सुपर सोको: झिओमीको इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल १,००० भन्दा कम युरोको लागि। चाँडै मार्केटमा ल्याउन गइरहेको चिनियाँ ब्रान्डबाट यो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकलको बारेमा थप जानकारी लिनुहोस्।
शाओमीले एन्ड्रोइड वनको साथ अधिक फोनहरू सुरुवात गर्दैछ
शाओमीले एन्ड्रोइड वनको साथ अधिक फोनहरू सुरूवात गर्दछ। चिनियाँ ब्रान्डको उनीहरूको फोनमा एन्ड्रोइडको यो संस्करण प्रयोग गर्ने योजनाहरूको बारेमा थप जानकारी लिनुहोस्।
HOMTOM फ्यान महोत्सव: HOMTOM फोनमा छुटको फाइदा लिनुहोस्
टमटपमा HOMTOM फोनहरूमा छुटहरूको फाइदा लिनुहोस्। यी पदोन्नतीहरूको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस् जसमा तपाईं ब्राण्डको फोनको एक खरीदलाई उत्तम मूल्यमा April० अप्रिलसम्म खरीद गर्न सक्नुहुनेछ।
ग्यालक्सी ए of का नयाँ छविहरू, अब कुनै केस बाहेक
बजारमा हिट गर्ने अर्को सामसु hit टर्मिनलको पहिलो छविहरू: सामसु Galaxy ग्यालेक्सी ए and र ए + + हुनेछ
Meizu एक Android Go फोन सुरूवात गर्न
Meizu यस वर्ष एक Android Go फोन सुरुवात गर्नेछ। यस वर्ष बजारमा चिनियाँ ब्रान्डले बजारमा ल्याउन लागेको कम एन्ड फोनको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
LG G7 ThinQ को पूरा डिजाइन फिल्टर गर्नुहोस्
LG G7 ThinQ: फोनको डिजाइन पूर्ण रूपमा चुहाएको छ। ब्राण्डको नयाँ उच्च-अन्तको डिजाइनको बारेमा अधिक पत्ता लगाउनुहोस् जुन पहिले नै चुहावट भयो।
पुष्टि गरियो: वनप्लस सँग पछाडि गिलास हुनेछ
वनप्लस का पछाडि शीशाले बनेको हुनेछ। फर्मको उच्च-अन्तको डिजाइनको बारेमा अधिक पत्ता लगाउनुहोस् जुन शीशाले बनेको छ।
नयाँ Meizu त्रिकान्त यहाँ छ! हामी तपाईंलाई Meizu १,, १ Plus प्लस र M15 लाई परिचय गराउँछौं
हिजो, Meizu फोन को नयाँ त्रयो शुरू गर्‍यो। हामी Meizu १ 15, Meizu १ Plus Plus र M15 को बारेमा कुरा गर्दैछौं, Meizu १ Lite लाइट पनि भनिन्छ, पहिलो दुई मध्ये सबैभन्दा सामान्य संस्करण उल्लेख गरिएको छ। यी उपकरणहरूका सबै प्राविधिक विवरणहरू र सुविधाहरू जान्नुहोस्!
पीओपी वायरलेस र हेलो लेजर इयरफोन: मीजुको नयाँ हेडफोन
पीओपी वायरलेस र हेलो लेजर इयरफोन: चिनियाँ ब्रान्डबाट नयाँ हेडफोनको बारेमा अधिक जान्नुहोस् जुन यस हप्तामा आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
OUKITEL WP5000: फोन उत्तम मूल्यमा चरम परिस्थितिमा प्रतिरोधी छ
OUKITEL WP5000: उत्तम मूल्यमा रबड फोन। ब्रान्डको फोनको बारेमा अधिक खोज्नुहोस् जुन अब उत्तम प्रमोशनल मूल्यमा उपलब्ध छ।
Android Oreo मा ग्यालक्सी S7 अपडेट मे सम्म ढिला भयो
ग्यालक्सी एस to सम्बन्धी हामीसँग आउने पछिल्लो खबरहरूले स Android्केत गर्दछ कि एन्ड्रोइड ओरियोको अन्तिम संस्करणको प्रक्षेपण एक महिनाको लागि ढिला भयो, मध्य मे सम्म।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी A6 र A6 + को डिजाइनको पहिलो छविहरू
ग्यालक्सी ए and र ग्यालक्सी ए ++ कस्तो देखिनेछ को पहिलो छवि भर्खर एक केस निर्माताबाट लीक गरिएको छविहरूको माध्यमबाट चुहियो।
एक अविश्वसनीय प्रक्षेपण प्रस्तावको साथ ब्लूबू S3 भेट्नुहोस्
एक अपराजेय मूल्यमा ब्लूबु S3 प्राप्त गर्नुहोस्। तपाईं 8000 एमएएच ब्याट्री,6"स्क्रीन र 21Mpx +5Mpx को सामसुdडुअल क्यामेरा संग एक कल्पना को कल्पना भन्दा धेरै को लागी एक स्मार्टफोन पाउन सक्नुहुन्छ।
LG G7 ThinQ गुगल सहायकका लागि आफ्नै बटन हुनेछ
LG G7 ThinQ गुगल सहायकका लागि समर्पित बटन हुनेछ। बटनको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस् जुन उच्च-अन्तमा फोनमा आउँनेछ जुन कृत्रिम बुद्धिमत्ताबाट धेरै प्रतिष्ठा पाउनेछ।
शाओमी ब्ल्याक शार्क बिक्रीको पहिलो दिनमा बिक्री भयो
शाओमी ब्ल्याक शार्क बिक्रीको पहिलो दिनमा चीनमा बेचेको छ। चिनियाँ ब्रान्डको पहिलो गेमि phone फोनको सफलताको बारे थप जान्नुहोस् जुन केहि सेकेन्डमा बिक्री भयो।
नयाँ TENAA सूचीको अनुसार Xiaomi Mi 6X का सुविधाहरू र विशेष विवरणहरू
TENAA Xiaomi Mi 6X को गुणहरु को एक नयाँ सूची को पुष्टि गर्छ र ती हामीले धेरैलाई पहिले नै थाहा पाएका थियौं। यो मध्य-दायरा आगामी अप्रिल २ 25 मा आइपुग्नेछ जुन एक प्रस्तुतिकरण घटना मार्फत चिनियाँ फर्म शाओमीले हाम्रो लागि तयार गरिसकेको छ।
Meizu १,, १ Plus Plus र M15 का विशेषताहरु फिल्टर गरीएको छ
मेईजु १ of को प्रस्तुतीकरणको एक दिन भन्दा पनि कम समयमा, यस यन्त्रको विशेषताहरू र प्राविधिक विवरणहरू यसको अन्य दुई रूपहरू, Meizu १ Plus प्लसको साथ फिल्टर गरिएको छ, सामसु end Exynos 15 15 8895 eight आठ कोर प्रोसेसरको एक उच्च-अन्त, र Meizu M15, एक मध्यम सीमा एक SD625 SoC द्वारा सुसज्जित।
LG K11 र K9: फर्मको नयाँ प्रविष्टि दायरा यूरोप आइपुग्छ
LG K9 र K11: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र आधिकारिक सुरुवात। ब्राण्डको तल्लो-अन्तका फोनहरूको बारेमा थप फेला पार्नुहोस् उनीहरूको प्रवेश-स्तर दायरा नविकरण गर्न खोज्दै।
ईबे सुपर सप्ताहन्तको समयमा a०% छुटको साथ प्रस्ताव
इबे सुपर वीकएन्ड सबै ब्रान्डको इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूमा especially०% सम्म छुटमा विशेष गरी एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा फिर्तामा फर्कन्छ।
Ulefone Power 5, एक विशाल १ a००० एमएएच ब्याट्रीको साथ मोबाइल भेट्नुहोस्
Ulefone, एशियाई फर्म, हामीलाई Ulefone पावर 5, एक विशाल र अविश्वसनीय १,13.000,००० एमएएच ब्याट्रीको एक मध्य-दायरा एन्ड्रोइड टर्मिनल लेराउँदछ जुन चार्जर र प्लगको बारेमा चिन्ता नगरिकन हामीलाई धेरै दिन प्रयोगको आश्वासन दिन्छ। हामी तपाईलाई प्रस्तुत गर्दछौं!
नूबिया रेड जादू: बजारमा नयाँ गेमि smartphone स्मार्टफोन
नूबिया रेड जादू: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र सुरुवात। चिनियाँ ब्रान्डबाट पहिलो गेमि phone फोनको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्, जुन कार्यक्रममा आधिकारिक अनावरण भइसकेको छ।
हgक Kongको ग्लोबल सोर्स २०१ 10 मा प्रस्तुत कम्पनीको क्याटलगसँग मिल्ने मोबाइल लीगू एस १०, एक मोबाइल
लीगुले यसको अर्को फ्लगशिप प्रस्तुत गर्दछ, लिगू एस १०, एन्ड्रोइड मोबाइल ट्रिपल रियर क्यामेरा र स्क्रिनमुनि फिंगरप्रिटर रिडरको साथ। थप रूपमा, उसले हालको बजारमा आफ्ना योजनाहरू प्रस्तुत गर्दछ, र दिशा खुद्रा क्षेत्रमा उसले लिन्छ। हामी तपाईंलाई विस्तार!
Huawei आफ्नो ब्रांड अन्य ब्रांडहरु लाई Kirin प्रोसेसर बेच्न को योजना छैन
हुवावेले किरीन प्रोसेसरहरू अन्य ब्रान्डमा बेच्ने छैन। कम्पनीको निर्णयको बारेमा अधिक जान्नुहोस् र किन उनीहरू आफ्नो प्रोसेसरहरू अन्य कम्पनीहरूमा बेच्न चाहँदैनन्।
आदर १०: सम्मानको नयाँ उच्च-अंत अब आधिकारिक छ
आदर १०: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र आधिकारिक सुरुवात। चिनियाँ ब्रान्डको उच्च-अन्तको बारेमा सबै फेला पार्नुहोस् जुन आज चीनमा आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यसको विनिर्देशहरू, मूल्य र यो मार्केटमा कहिले हिट हुनेछ।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी A5 २०१ ले Android Oreo O.० प्राप्त गर्न सुरू गर्दछ
ग्यालक्सी ए5२०१ 2017 को लागि लामो समयदेखि प्रतीक्षित एन्ड्रोइड ओरिओ अपडेट डाउनलोडका लागि उपलब्ध हुन सुरू भयो।
नोकिया Plus प्लस अब स्पेनमा उपलब्ध छ
नोकिया Plus प्लस अब आधिकारिक रूपमा स्पेनमा खरीद गर्न सकिन्छ। MWC २०१ at मा प्रस्तुत गरिएको ब्रान्डको नयाँ फोनको बारेमा थप फेला पार्नुहोस् र यो पहिले नै स्पेनमा छ।
अमेरिकी निषेधका कारण ZTE Android को बिना छोड्न सक्दछ
ZTE आफ्नो एन्ड्रोइड लाइसेन्स गुमाउन सक्छ अमेरिका मा निषेध को कारण। कम्पनीले यसको अवरोधका कारण सामना गरिरहेका समस्याहरूको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस्।
मार्च २०१ 10 को १० सब भन्दा शक्तिशाली फोनहरू, एन्टु बेन्चमार्कका अनुसार
आन्टुले बजारमा महिनाको सब भन्दा शक्तिशाली टर्मिनलहरूको सूची ल्याउँदछ, जुनमा यस अवसरमा हामी दुई नयाँ सामसु flag्या फ्ल्यागशिपहरू ग्यालक्सी एस and र एस Plus प्लसको क्षण देख्न सक्दछौं।
यसको प्रस्तुतीकरण अघि Nubia Z18 को विशेषताहरु फिल्टर गर्नुहोस्
नुबिया जेड १:: उच्च अन्त्यका विवरणहरू फिल्टर गर्नुहोस्। चिनियाँ ब्रान्डको उच्च-अन्त्यको बारेमा अधिक जानकारी लिनुहोस् जसको विनिर्देशहरू पहिले नै चुहावट भयो।
ब्लूबू S3, battery 8500००mAh ब्याट्रीको साथ एक आर्थिक मोबाइल
हामी तपाइँलाई ब्लूबू एस present प्रस्तुत गर्दछौं, जसको टर्मिनल यसको सबै विशेषताहरू र प्राविधिक विवरणहरू अब धेरै दिनहरूको लागि परिचित छन्, र जुन ब्या Bang्गूड मार्फत बिक्री हुनेछ, भोलि अप्रिल १ starting देखि १3यूरो भन्दा कम मूल्यमा बिक्रीको लागि उपलब्ध हुनेछ।
सामसुले विशेष संस्करण ग्यालेक्सी S9 फॉर्मूला १ सुरू गर्‍यो
रेड बुल र सामसु .को सहयोगमा भोडाफोनले ग्यालेक्सी एस and र ग्यालक्सी एस of को विशेष संस्करण जुलाई १ मा आयोजित अस्ट्रियन ग्रान्ड प्रिक्सको अवसरमा सुरू गर्यो।
Xiaomi Mi 6X को पहिलो आधिकारिक छविहरु अनावरण गरियो
शाओमी मी 6X को पहिलो आधिकारिक छविहरू पहिले नै वास्तविकता हो। चिनियाँ ब्रान्डको फोनको डिजाइनको बारे अधिक जान्नुहोस् जुन पहिले नै पूर्ण अनावरण गरिएको छ।
उपभोक्ता रिपोर्टहरूले ग्यालक्सी एस the लाई बजारको सर्वश्रेष्ठ स्मार्टफोनको रूपमा प्रस्तुत गर्दछ
अमेरिकी स्वतन्त्र निकाय, उपभोक्ता रिपोर्टका अनुसार ग्यालक्सी S9 र S9 + दुई उत्कृष्ट स्मार्टफोनहरू हुन् जुन अहिले उच्च-श्रेणीमा उपलब्ध छ।
सामसुले खाचको साथ एक सबै स्क्रिन स्मार्टफोन प्याटेन्ट गर्दछ
सामसुले खाचको साथ एक सबै-स्क्रीन फोन पेटन्ट गरेको छ। फर्मको नयाँ प्याटेन्टको बारेमा अधिक पत्ता लगाउनुहोस् जुन फोनको लागि निशानको साथ खडा हुन्छ।
OnePlus6एक नयाँ भिडियो अनुसार जलरोधक हुनेछ
OnePlus6वाटरप्रूफ हुन गइरहेको छ। कम्पनीले अपलोड गरेको भिडियोको बारेमा अधिक जान्नुहोस् कि फोन जलरोधक हुनेछ भनेर पुष्टि गर्दछ
सोनी Xperia XZ2 प्रीमियम डुअल क्यामेरा र 4K स्क्रीन संग आधिकारिक हो
हामी तपाईंलाई नयाँ सोनी Xperia XZ2 प्रीमियमको सम्पूर्ण विवरण दिन्छौं, सम्पूर्ण श्रृंखलाको सब भन्दा शक्तिशाली उपकरण
Oukitel WP5000 को अनबक्सि।
Oukitel WP5000 को बजारमा आगमनको केही दिन अघि, हामी तपाईंलाई एक भिडियो देखाउँदछौं जहाँ हामी यस मुख्य टर्मिनलको केही प्रमुख अपरेटिंग सुविधाहरू सहित यस टर्मिनलको पूर्ण अनबक्सिंग देख्न सक्छौं।
शाओमी मी A1 भारत मा स्टक बाहिर
शाओमी मी ए 1 भारतमा बेचेको छ। फोन स्टकको अन्त्यको बारेमा अधिक पत्ता लगाउनुहोस् जसको मतलब कि Xiaomi Mi A2 धेरै चाँडै स्टोरहरूमा पुग्न जानेछ।
Honor 10 TENAA मार्फत जान्छ र यसको प्राविधिक विशिष्टताहरू प्रकट गर्दछ
Honor को Honor 10 तैयार छ जस्तो देखिन्छ, यसको अर्को उच्च-अन्त जुन अर्को बजारमा अर्को कम्पनीको अन्य प्रमुख फ्ल्यागशिपसँग लड्न सक्ने सबै शक्ति संग यसको विशेषताहरु र टेक्निकल विशिष्टताको लागि धन्यवाद छ जुन चिनियाँ नियामक र सर्टिफायरले बताउँछ भर्खरै प्रकट भयो। हामी तपाईंलाई भन्छौं!
शाओमी मी 6X को पहिलो वास्तविक छवि यहाँ छ
Xiaomi Mi 6X को पहिलो आधिकारिक छवि पहिले नै वास्तविक छ। चिनियाँ ब्रान्डबाट नयाँ फोनको बारे अधिक जान्नुहोस् जुन चाँडै बजारमा थाल्नेछ र आधिकारिक रूपमा अप्रिल २ 25 मा प्रस्तुत हुनेछ।
HMD ग्लोबल अप्रिल २ 27 मा नोकिया X लाई पेश गर्ने
नोकिया एक्स आधिकारिक अनावरण अप्रिल २ on मा हुनेछ। यस महिना पछि ब्रान्डको नयाँ फोनको अनावरण मितिको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस्।
ग्यालक्सी S9 मा डोनाल्ड डक संवर्धित वास्तविकता इमोजी कसरी स्थापना गर्ने
हामी अब हाम्रो ग्यालक्सी S9 र ग्यालक्सी S9 + मा डोनाल्ड डकको एआर इमोजीको मजा लिन सक्दछौं। यदि तपाईंलाई यो स्थापना गर्ने तरिका थाहा छैन भने, यस लेखमा हामी यसलाई कसरी गर्ने भन्ने बारे व्याख्या गर्दछौं।
नुबिया रेड डेभिलको पहिलो छवि फिल्टर गरियो
नुबिया रेड डेभिल: चिनियाँ ब्रान्डको गेमि phone फोनको पहिलो छवि पहिले नै चुहावट भैसकेको छ, त्यसैले फोन फोनले के देखाउँदछ भन्ने कुरा हामीलाई पहिले नै थाहा छ। यद्यपि तपाईं धेरै देख्न सक्नुहुन्न।
एक नयाँ पोस्टरले शाओमी मी6एक्सको सुरुवातको पुष्टि गर्दछ
शाओमी मी X एक्सको पहिलो पोस्टर पहिले नै प्रकट भइसकेको छ। चिनियाँ ब्रान्डको नयाँ फोनको पहिलो प्रचार पोस्टर खोज्नुहोस् जुन अप्रिल २ on लाई प्रस्तुत गरिनेछ।
Vivo V9 युवाको विशिष्टताहरू फिल्टर गर्नुहोस्
Vivo V9 युवा: फोन स्प्यासीफिकेस भयो। चिनियाँ ब्रान्डबाट फोनको बारेमा बढि जान्नुहोस् जुन छिट्टै मार्केटमा हिड्ने आशा गरिन्छ।
यसको फर्मवेयरका अनुसार Xiaomi Mi 6X का प्राविधिक विवरणहरू
यस फोनको भर्खरको लीक फर्मवेयरका अनुसार शाओमी मी X एक्सको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्सको बारेमा जान्नुहोस्, र टेक्निया, चिनियाँ नियामक र सर्टिफायरले फिल्टर गरेको धेरै टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स र विशेषताहरू जसको माध्यमबाट विशाल एसियाली देश बजारमा आउने सबै उपकरणहरू पास हुन्छन्। ।
सामसु SM एसएम- G8850 यसको मुख्य विशेषताहरु को साथ AnTuTu मा देखा पर्छ
सामसु SM एसएम- G8850० TENAA मा भर्खरै यसको धेरै सुविधाहरू र मुख्य टेक्निकल स्पेसिफिकेसनको साथ लीक भएको छ जुन हामी तल कुरा गर्नेछौं। सब भन्दा बाहिर उभिएकाहरू मध्ये, हामी एक आठ-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर, Android .8.0.० Oreo, र २,२२० x १,०2.220० p स्क्रिन फेला पार्दछौं।
सियामी ब्ल्याक शार्क: ब्रान्डको गेमि smartphone स्मार्टफोन अब आधिकारिक छ
सियामी ब्ल्याक शार्क: निर्दिष्टीकरणहरू, मूल्य र आधिकारिक सुरुवात। चिनियाँ ब्रान्डबाट आज घोषणा गरिएको पहिलो गेमि smartphone स्मार्टफोनको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।
LG ले यसको सफ्टवेयर विकास केन्द्रको लागि छिटो अपडेटहरू प्रस्ताव गर्दछ
एलजीले सफ्टवेयर सुधार गर्न एक विकास केन्द्र खोल्छ। यस फोनको साथ कम्पनीको योजनाहरु बारे अधिक जान्नुहोस् जुन तिनीहरुले फोनको सफ्टवेयरमा सुधार ल्याउन खोज्छन्।
वनप्लस T टी यूरोपमा बिक्री भइरहेको छ
वनप्लस T टी युरोपभरि स्टक बाहिर छ। फोनको बारेमा अधिक जानकारी पाउनुहोस् जुन युरोपमा पहिले नै बेचिएको छ, केही हप्ता पछि संयुक्त राज्य अमेरिकामा बिक्री भइसकेको छ।
रेड डेभिल: नूबियाको गेमि smartphone्ग स्मार्टफोन अप्रिल १ on मा आउनेछ
Nubia अप्रिल १ on मा यसको रेड डेभिल गेमि phone फोन अनावरण गर्दछ। चिनियाँ ब्रान्डको पहिलो गेमि phone फोनका बारे थप जान्नुहोस् जुन आधिकारिक रूपमा अर्को हप्ता प्रस्तुत हुनेछ।
शाओमीले अप्रिल २ 25 मा आफ्नो नयाँ फोन प्रस्तुत गर्नेछ, सायद शाओमी मी6एक्स
शाओमीले अप्रिल २ 25 मा आफ्नो नयाँ फोन प्रस्तुत गर्ने छ। चिनियाँ ब्रान्डले यस महिना पछि यसको नयाँ उपकरण परिचय गर्ने योजनाहरूको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
Huawei Y6 2018 र Huawei Y7 2018: Y दायरामा नयाँ फोनहरू
Huawei Y6 2018 र Huawei Y7 2018: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र सुरुवात। चिनियाँ ब्रान्डबाट नयाँ वाई-रेंज फोनका बारे अधिक जान्नुहोस् जुन आज अनावरण गरिएको थियो।
एक सामसु SM एसएम- G8850 TENAA मा देखा पर्दछ। यो सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S9 मिनी हुनेछ?
हालसालै एउटा सामसु SM एसएम- G8850०, दक्षिण कोरियाली फर्मबाट सम्भव स्यामसंग ग्यालेक्सी एस Mini मिनी भर्खरै चुहावट भयो। टेनाका अनुसार यस उपकरणले nice.9 इन्चको सुपर एमोलेड स्क्रिनले २. 5.8 x० x १2.960० पिक्सेलको उदार QuadHD + रिजोलुसनमा सुसज्जित आउँदछ, साथै अन्य राम्रा सुविधाहरू र विनिर्देशहरूको अतिरिक्त।
शाओमी ब्ल्याक शार्कको छोटो भिडियो लीक भयो
सियामी ब्ल्याक शार्कको आधिकारिक प्रस्तुती हुनुभन्दा एक दिन अघि टर्मिनलको छोटो भिडियो चिनियाँ सोशल नेटवर्क, वीबोमा आएको छ।
नयाँ Huawei P20 Pro iFixit अनुसार मर्मतको लागि १० मध्ये4प्राप्त गर्दछ
IFixit केटाहरूको हातमा, Huawei P20 Pro भर्खरै सकियो, टर्मिनल जसले भर्खर एउटा अ a्क प्राप्त गरेको छ जुन हामी प्रयोग गर्दैनौं।
LG V35 ThinQ को पहिलो विशिष्टता फ़िल्टर गरियो
LG V35 ThinQ: पहिलो विशिष्टता चुहायो। ब्रान्डको नयाँ उच्च-अन्तको पहिलो विशिष्टिकरणहरूको बारेमा अधिक पत्ता लगाउनुहोस् जुन पहिले नै चुहावट भयो।
फोर्टनाइटसँग मिल्दो एन्ड्रोइड फोनहरूको सूची थाहा पाउनुहोस्!
फोर्टनाइट, यस पलको सब भन्दा लोकप्रिय खेलहरू मध्ये एक, एन्ड्रोइड फोनहरूको एक सूची खुलासा गरिएको छ जुन गुगल प्ले स्टोरमा रिलीजको समयमा खेलसँग मिल्नेछ। हामी तपाईंलाई जानकारी दिन्छौं!
गुगल स्टोरले पिक्सेलको पहिलो जेनरेशन बेच्न रोक्छ
पिक्सेलको पहिलो जेनेरेशन अब गुगल स्टोरमा बेचिंदैन। आधिकारिक स्टोरमा कम्पनीको पहिलो फोनहरूको बिक्रीको अन्त्यको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी J7 डुओ पहिले नै कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइटमा छ
दक्षिण कोरियाली कम्पनी सामसु .सँग पहिले नै सामसु Galaxy ग्यालेक्सी जे ready डुओ तयार छ, एक मध्यम दूरीको मोबाइल जुन स्यामसंग भारतको आधिकारिक वेबसाइटमा १ 7, 16.990 XNUMX ० रुपैयाँमा निर्धारण गरिएको छ। यो उपकरण ब्रान्डको J श्रृंखलाको टर्मिनलको सामान्य डिजाइन र शैलीको साथ आउँदछ। यसलाई जान्नुहोस्!
हामी तपाइँलाई Nubia Z18 Mini, फर्मको नयाँ मध्य-दायरा प्रस्तुत गर्दछौं
नुबिया जेड १ Mini मिनी, जेड १ of को सामान्य संस्करण, यो मध्य-दायरा भर्खरै आफ्ना सबै फाइदाहरू र फाइदाहरूसहित जारी गरिएको छ, र यो कुनै पनि हिसाबले खराब छैन, किनभने यसको विशेषताहरू र लाभहरूको लागि धन्यवाद, यो एक उत्तम मिडको रूपमा अवस्थित छ -व्यवहार प्रीमियम। हामी तपाईलाई प्रस्तुत गर्दछौं।
ब्ल्याकभ्यू P10000 प्रो: कम खपतको साथ ११,००० mAh ब्याट्री
ब्ल्याकभ्यू P10000 प्रो: ब्याट्री खपत परीक्षण पास। फोनको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस् जुन यस ब्याट्री परीक्षणमा आयो र कुनै समस्या बिना नै पास भयो।
शियोमीले एमआई,, एमआई एमआईएक्स र एम आई नोट २ को लागि एन्ड्रोइड ओरेओको ग्लोबल बिटा खोल्छ
Xiaomi Mi 5, Mi MIX र Mi नोट2ले Android Oreo बीटा प्राप्त गर्दछ। बेटा प्रोग्रामको बारेमा अधिक जानकारी पाउनुहोस् जुन आधिकारिक रूपमा चिनियाँ ब्रान्डको तीन फोनका लागि खुल्छ।
ZTE ले Axon 9, Axon9Pro र अन्य मोडेलहरू दर्ता गर्दछ
ZTE ले Axon9र9Pro र धेरै अन्य फोनहरू दर्ता गर्दछ। फोनको सूचीको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस् जुन ब्रान्डले पहिले नै दर्ता गरिसकेको छ र २०१ 2018 भरै स्टोरहरूमा आइपुग्नेछ।
Ulefone S7 Go ले Android Go (Oreo संस्करण) फिचर गर्दछ
Ulefone S7 Go: Android Go (Oreo संस्करण) को साथ नयाँ फोन। चिनियाँ ब्रान्डको नयाँ मोडेलको बारे अधिक जान्नुहोस् जुन चाँडै मार्केटमा आइपर्नेछ।
LAGOO S9:-१.1,99। को लागि प्रि-अर्डर सिग्नेचर खाच फोन
अर्डर गर्नुहोस्9१.1,99 को मूल्यमा लेगोग SXNUMX। चिनियाँ ब्रान्डको फोनमा यो विशेष पदोन्नतिको बारेमा अधिक जान्नुहोस् जुन चाँडै मार्केटमा आइपर्नेछ।
Honor 7C र 7A आफ्नो प्रस्तुतीकरण हप्तौं पछि स्पेनमा आइपुग्छ
Honor 7C र Honor 7A आधिकारिक रूपमा स्पेनमा आइपुग्छ, र केही दिनदेखि बिक्रीको लागि उपलब्ध हुनेछ। समान सुविधाहरू र सुविधाहरूका साथ यी दुई उपकरणहरू केही हप्ता अघि चीनमा सुरू गरिएको थियो। हामी तपाईंलाई विस्तार!
LG G7 ThinQ मे २ मा न्यूयोर्कमा प्रस्तुत गरिने छ
ओनलिक्सका अनुसार कोरियाली कम्पनी एलजीले आधिकारिक रूपमा एलजी जी Th थिन्कलाई मे २ मा न्यु योर्कमा प्रस्तुत गर्ने छ।
नयाँ Oukitel WP10 खरीद गर्नका लागि १० कारणहरू
यदि तपाइँ तपाइँको स्मार्टफोन नवीकरण गर्ने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, तपाइँ Oukitel WP5000 लाई ध्यानमा राख्नुहुनेछ, एउटा उत्कृष्ट टर्मिनल जुन यस लेखमा हामीले विस्तृत रूपमा विचार गर्दछौं।
शाओमी मी of का केही संस्करणहरू बिक्री भइसकेका छन्
शाओमी मी6का धेरै संस्करणहरू पहिले नै बिक्री भइसकेका छन्। यस समाचारको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस् जसको मतलब कि सियाओमी मी7को आगमन अब पहिलेभन्दा धेरै नजिक छ।
शाओमीको ब्ल्याक शार्कको नयाँ छविहरू चुहियो
शाओमी ब्ल्याक शार्कका नयाँ छविहरू चुहावट भयो। सियाओमी फोनको बारेमा बढि जान्नुहोस् जुन चाँडै बजारमा आउँदैछ र धेरै उत्साह उत्पन्न गर्दैछ।
ZTE आइसबर्गको प्रोटोटाइप फिल्टर: डबल खाचको साथ स्क्रीन
ZTE आइसबर्ग: स्क्रिनमा डबल खाचको साथ डिजाइन फिल्टर। ब्रान्डको नयाँ फोनको बारेमा थप खोजी फेला पार्नुहोस् जुन यसको स्क्रिनमा डबल निशानमा शर्त लगाएर आश्चर्यचकित हुन्छ।
स्मार्टिसन नट एक विशाल 3००० एमएएच ब्याट्रीको साथ चित्रित छ
स्मार्टिसनले हामीलाई स्मार्टिसन नट brings ल्याउँदछ, नयाँ मोबाइल जुन केवल .3.१7.16 मिलिमिटर मोटोको सट्टामा सुरुचिपूर्ण र पातलो डिजाइनको साथ आउँदछ, र एक विशाल ,4.000,००० एमएएच ब्याट्री जुन कुनै श doubt्का बिना, हामीलाई एक राम्रो स्वायत्तता प्रदान गर्नेछ जुन हामीलाई बनाउनेछ। केही बेरको लागि प्लग र चार्जर बिर्सनुहोस्
एचटीसी यू १२ प्लस क्वालकम स्नैपड्रैगन 12 and र GB जीबी र्यामको साथ आउँछ नयाँ लीकमा
HTC U12 भर्खरै यसको धेरै टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्सको साथ लीक भयो। यो उपकरण ताइवानको उत्तमसँग आउँदछ, जसको लागि यस ब्राण्डको एक पटकको राम्रो दिनहरूमा भएको सफलता बढाउने जिम्मेवारी छ। हामी तपाईंलाई भन्छौं!
वनप्लसले सबै समर्थित मोडेलहरूको लागि भर्खरको ऑक्सीजन बिटा तान्छ
वनप्लसका केटाहरूले सबै अक्सिजन ओएस बिटाहरू फिर्ता लिन बाध्य भएका छन जुन उनीहरूले हालसम्म उपलब्ध ब्याट्री खपतका कारण यी उपकरणहरूका प्रयोगकर्ताहरूलाई उपलब्ध गरेका थिए।